Ukufundisa umntwana kuKayak
Umncinci Umncinci Kangakanani Ukuba Ufundise Abantwaba Bam kuKayak?
Ubaba noNyana weKayaking. Ifoto © nguSusan Sayour
Wonke umzali onokuthi ama-kayaks afune ukuthatha abantwana bawo ukuba bahambe ngokukhawuleza ngokukhawuleza xa abantwana babo behamba. Nangona le nto ingase iqhube umpu ngokukhawuleza, kuyinyaniso ukuba siya kukhangela zonke izizathu zokuqala ukufundisa abantwana bethu ukuba bahambe . Umbuzo ojikeleza phakathi kwabazali abatsha ngokuphathelele lo mbuzo, kukuba umntwana usemncinci kangakanani ukuba afundise abantwana bam ukuya kwi-kayak
Impendulo yalo mbuzo ihlanganiswe kumandla omntwana ngamnye wokubhukuda kunye nokuqonda iingcamango ezintsha. Ukufundisa umntwana ukuya kwi-kayak kunento eninzi enokuyenza ngokukhawuleza komzali okwenzayo ukufundisa. Nangona kungekho mpendulo epheleleyo eya kuhambelana nomntwana ngamnye okanye imeko apho kukho amanyathelo angundoqo onokuyilandela ukunceda inkqubo. Eli nyathelo-nge-nyathelo liya kuchaza indlela yokuhamba malunga nokufundisa umntwana ukuya kwi-kayak
Fundisa Umntwana Wakho ukhuseleko lwamanzi Ngoxa iKayaking
Umzali uzila ngokukhawuleza i-pfd kumntwana wakhe. Ifoto © nguSusan Sayour
Kungakhathaliseki ukuba uneminyaka engakanani yomntwana oya kufundisa kwi-kayak, inkxalabo ebalulekileyo kukuba yokhuseleko lwabo. Ukhuseleko lwamanzi lwamanzi lube yinto ephambili. Qinisekisa ukuba umntwana wakho ugqoke ngokukhuselekileyo kwamanzi ngaphambi kokusondela kwamanzi. Ngaloo ndlela akukho zengozi okanye ukuphazamiseka ukuba uyazisola kamva. Umntwana wakho kufuneka agqoke i- pfd efakwe kakuhle , izicathulo zeetowne ezivaliwe ngokukhuselekileyo okanye izicathulo zamanzi, kunye ne-sun block ukubiza izinto ezimbalwa. Kwakhona, qiniseka ukuba uphinde uqaphele ukuba zonke iibhakle kunye nokulungelelana. Ukuba kukho enye into kufuneka uphume kule nqaku kufuneka ukuba ukugqoka ukhuseleko lwamanzi kufuneka kube yinto ephambili yakho kuqala kumntwana wakho.
Fundisa abantwana baKhuseleko lweKayaking ngeModeli
Indodana ilinda uyise ebeka kwi-kayak yokuphepha. Ifoto © nguSusan Sayour
Esinye sezifundo ezibalulekileyo abantwana bakho abanokuzifumana ngokuphathelele ukhuseleko lwe-kayak kukukubona emva kwezifundo ezifanayo ozifundisayo. Kubalulekile ukuba ufanise ukuziphatha okufanayo okulindele kumntwana wakho. Oku kuthetha ukuba nawe ufanele ugqoke i- pfd yakho, ukhuseleko lweenyawo , kunye nantoni na into okulindele ukuba umntwana wakho ayenxibe ngexesha le-kayak. Oku kuhamba nayiphi na ubudala abantwana bakho. Abantwana abaselula bayakuxabisa ngokukhethekileyo ukuziphatha okuqhelekileyo oku kuhamba kakubi. Intsana yam yathanda ukuba wayegqoke i-pfd nje ngobaba. Kwakhona, ukhuseleko lwamanzi kubantwana luyinto ebaluleke kakhulu malunga nama-kayak namava onke ngoko ke uqiniseke ukuba ugqoke ukuphepha kwamanzi kunye ne-kayak.
Fundisa Izingane Zabo Isifundo Sokuqala SakwaKayak Ngoxa Sisesemhlabeni
Yenza "umfundi" wakho angene kwi-kayak ngelixa esemhlabeni. Ifoto © nguSusan Sayour
Kungabonakala kungaqhelekanga ukufundisa abantwana ukuba bahambe nge-kayak ngelixa besemhlabeni kodwa kubaluleke kakhulu. Isifundo sokuqala se-kayaking kufanele senzeke phambi kokuba ungene emanzini. Kubantwana abancinci, oku kuya kubanceda bafumane ukhululekile baze balungiselele oko bafuna ukukwenza. Kubantwana abakhulileyo kunye nentsha, oku kunceda ukugcina ingqalelo ngenkathi unako.
Ngesinye ixesha emanzini, kuphelile ukuba ufundise izinto ezithile malunga neekheji. Ngaba umntwana uhlale kwi-kayak emhlabeni kwaye uchaze izinto ezisisiseko malunga nendlela ezivakalelwa ngayo kwi-kayak. Le yindlela endiyisebenzisayo nabantu abadala njengokuba kukho ukukhathazeka okunempilo malunga nokunyuka. Ukuhlala kwi-kayak ngelixa lomhlaba kunceda ukunciphisa oloyiko. Kubantwana abakhulu abaza kukhangela ngokwabo, ndibafundise nendlela yokubamba i-paddle kunye neziseko ze-stroke ngaphambi kokuba bangene emanzini.
Njengoko wam unyana kuphela amabini, akukho nto ihamba ngayo ekuhambeni kwe- kayak phambili kwi-stroke ngexesha lomhlaba. Ndimxelele izinto ezinjengokungasimi okanye azincike kwicala le kayak. Le yile ngongoma apho uza kubona indlela efanelekileyo yokumisela umntwana wakho kwi-kayak nawe. Iimayakaki kunye ne-cockpits ezincinci kufuneka ubone ukuba unako ukuhambelana nomntanakho emgodini wakho
Vumela Umntwana Wakho Ukuphucula Ithemba leKayaking
Iingcebiso zokuthabatha iingcebiso zoMntwana wakho. Ifoto © nguSusan Sayour
Xa usesemanzini, ncedisa umntwana wakho ukhululeke aze athole ukuzithemba kweekhamera. Makhe bahlole kancinci ukuze bathuthuke baze bathemba. Qinisekisa oko wawafundisa ngenkathi usekhona emhlabeni. Ezi zihlandlo zokuqala ziya kuba zixela ukuba ubone ukuba umntwana uzolile kwaye ulawulwa phantsi kwexesha lakho kwi-kayak okanye ukuba ziya kuba zasendle kwaye zingabikho kolawulo. Gcina isandla kubo ngeli xesha. Umva we- pfd yindlela efanelekileyo yokubamba xa ubona oko bakwenzayo. Ukubavumela ukuba bachukumise amanzi kulungile. Khumbula, sifuna ukuba bathande le midlalo ngokufana nathi. Inxalenye yokupakisha kweyiphi na isikhephe kukuba unomntu onomileyo kunye nendalo. Ithemba lethu lokuba abantwana bethu bafunda ukuthanda eli liva.
Fundisa Umntwana Wakho I-Kayak Ngaphambili
Ukufundisa umntwana ukuba athabathe njani ukubethelwa kwangaphambili kwi-kayak. Ifoto © nguSusan Sayour
Xa umntwana wakho ekhululekile kwi-kayak, lixesha lokumfundisa indlela yokuhamba nge-kayak nento eyaziwa ngokuba yi- stroke . Isinyathelo sokuqala ukubafundisa indlela yokubamba i-kayak paddle . Oku kufanele kwenziwe kumhlaba onabantwana abadala. Ngezingane ezincinci kufuneka ubeke izandla zazo kwi-paddle uze ukhokele izibetho. Bafundise indlela yokwenza isigxina esilungileyo kunye nokukhokela i- kayak paddle ukuba kunokwenzeka.
Ingaba ngamava amaninzi okumanyanisa ukubeka umntwana emgodini wakho kunye nokudibanisa nabo. Unokusikhokela njani ukubetha kwabo endleleni, bebanika ithuba lokubona indlela i-kayak eya phambili ngayo isifo kufuneka iziva kwaye iyenze. Kufuneka kuqatshelwe ukuba ifom yakho ayibalulekanga kangako kunabo ngokwale nkalo njengoko kunzima ukufezekisa ukujikeleza kwethambo xa umntu ephakamileyo.
Vumela Umntwana Wakho Ufikelele Kwakhe
Ukufundisa Umntwana Wakho UKayak. Ifoto © nguSusan Sayour
Ngexesha elithile uza kufuneka uvumele ukuhamba kwaye unike umntwana wakho i- kayak paddle . Ngokuqinisekileyo, iintlobo ezimbalwa zokuqala eziza kutsho ziyakwenza ukuba unqande, kodwa khumbula ukuba kufuneka uqale kwindawo ethile. Njengoko umntanakho uhamba naye, uzinikela ngesikhokelo kodwa ungaxinzezeli okanye ubacaphukise.
Khumbula kwakhona, ukuba njengoko uvumela umntwana wakho ukuba aphephe ngokwabo mhlawumbi abayi kuqonda kakuhle into oyicelayo kubo. Yena, emva koko konke, nje umntwana. Zama ulungelelanise indlela othetha ngayo imiyalelo yakho ukukunceda umntwana wakho ahambe kangcono. Kodwa kwakhona, khumbula ukuba uthathe lula kubo. Ngaphambi kokuba wazi ukuba baya kukufundisa into okanye ezimbini kwi-cockpit. Kuze kube ngoko, qiniseka kuwo.
Xa uthatha intsapho yaseKayak Bavumele bavuyise amava
Ubaba kunye nendodana bayakuzonwabisa kunye neekhenyane. Ifoto © nguSusan Sayour
Njengoko ngokuthatha nayiphi na ilungu lentsapho yenqanawa, vumela umntwana wakho ukuba ajabule, ahlolisise, kwaye ahlekise ngexesha lohambo lweekhenyane. Bhala izinto ezithakazelisayo emanzini nasemhlabeni. Zama ukunikezela ezinye zezizathu ozithandayo ukukhwela kumntwana wakho. Ukuba unika ithuba lokuba ukhululekile uxinzelelo kwaye uzonandipha xa uthatha intsapho yakho ye-kayaking, iya kwandisa amathuba okuba afune ukubuyela kwakhona. Ekuhambeni kwexesha, uya kuphuma ekubeni nomntwana oqeqeshayo ukuba ube neqabane elincinci lokuhamba.
Ziziphi iingenelo ze-Type IV PFD?
Ngowe-2016 i-Olimpiki eCanoe / Kayak eRio de Janeiro
Iimpawu zoMlambo zeNkcazo zeNkcazo zeNkcazo eziMhlophe
Uluhlu lokuHlola lwamaMhlophe kunye noMlambo
Indlela yokulungiswa kwemonakalo kwii-Kayaks zePlastiki kunye neCanoes
I-Phylum Chordata - Iintsholongwane kunye nezinye izilwanyana
Iingcebiso ezi-9 KwiiNkokheli ezintsha zePagan
Kutheni Ubisi Ubumhlophe
Indlela yokwenza iColor Campfire Fire
Ziziphi iindlela zokungcwaba kwamaRoma?
Amagama amagama: Ingqondo
Inkcazo yeLe Chatelier Inkcazo
I-Googie ne-Tiki Architecture eMelika